Mystery ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
Confessions ဆိုတဲ့ကားလေးကတော့ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးလောကမှာရော စီးပွားရေးအရပါ သောက်သောက်လဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ psycho-thriller အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Yuko Moriguchi ဆိုတဲ့ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးက အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခု ဘဝနဲ့ နေ နေ တဲ့ Single mother တစ်ယောက်ပါ။ တပည့်တွေထက် သမီးဖြစ်သူကို ဦးစားပေးလွန်းတာကြောင့် တပည့်တွေရဲ့ အမြင်မကြည်ခြင်း ခံနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ ဒီလိုချစ်ရတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး မတော်တဆသေသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီသေဆုံးမှုက သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ဘဲ အသတ်ခံရတယ်ဆိုတာ သိသွားချိန်မှာတော့ သမီးအတွက်ပူဆွေးနေတဲ့ သောကတွေက ရက်စက်ခြင်းအဖြစ် ကူးပြောင်းသွားပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု။မင်းသမီးဆု၊ဇာတ်ပို့ဆုနှင့်း အခြားဆုများအပါအဝင်စုစုပေါင်း(၈)ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်…
Detective Chinatown (2) (2018)ကို တင်ပြီးသားပါ…2018ခုနှစ်ထွက်တဲ့ နံပါတ်(၂)ကို အတော်များများက ကြိုက်ကြတယ်..ရယ်လည်းရယ်ရသလို အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ဉာဏ်သုံးဖြေရှင်းသွားတာလေးတွေကလည်း ပညာတော်တော်ပါတဲ့အပြင် တင်ဆက်ပုံတွေကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်..ဒါကြောင့် အတော်များများက (1)ကိုတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်..(1)ကလည်း အတော်ရယ်ရသလို မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ချင်ဖုန်းဆိုတဲ့ စကားထစ်တတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ စုံထောက်အလုပ်ကို ဝါသနာပါလွန်းလို့ ရဲကောလိပ်ကို တက်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး စိတ်ဓာတ်တွေ အလုံးအရင်းလိုက်ကျနေတဲ့ ချင်ဖုန်းကို သူ့အဘွားဖြစ်သူက ပျော်စေချင်တဲ့အတွက် သူနဲ့ အမျိုးဆယ့်နှစ်ဝမ်းကွဲလောက်တော်တဲ့ ဦးလေးထန်ရန်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ် သူ့ဦးလေးထန်ရန်ဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ တရုတ်တန်းမှာ နာမည်ကြီးစုံထောက်လို့ အဖွားကတော့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောခဲ့လေရဲ့… တကယ်တန်းမှာတော့ သူက လမ်းပေါ်မှာပဲ ပေတေလေလွင့်နေတဲ့ လောင်းကစားသမားပါ သူ့တူဖြစ်သူ ချင်ဖုန်းရောက်လာတဲ့အခါ သူကြိုဆိုဧည့်ခံပုံတွေကလဲ အတော်ခွီရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေပါ အဲနောက်မှာတော့ ထန်ရန်ကို လူသတ်မှုတစ်ခုမှာ ချောက်တွန်းခံရတာကနေ သူတို့ တူဝရီးနှစ်ယောက် ပြေးရလွှားရနဲ့ အမှုဖော်တာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ဉာဏ်ကောင်းပြီး စုံထောက်ဝတ္ထုတွေ ဇာတ်လမ်းတွေကနေ ထောက်လှမ်းနည်းတွေကို သင်ယူခဲ့တဲ့ ချင်ဖုန်းရဲ့ စကေးတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ ဒီ့အပြင် နောက်ဆုံးမှာတော့ ချင်ဖုန်း ဘာလို့ ရဲကောလိပ်ကို ဝင်ခွင့်မရလဲ ဆိုတဲ့ တကယ့်အကြောင်းရင်းကလည်း ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်… ဒီတော့ ထန်ရန်နဲ့ ချင်ဖုန်း နှစ်ယောက်သား ဘယ်လိုအတွဲညီညီနဲ့ အမှုမှန်ဖော်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဟာသဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြပါ…
Edge of Innocent (2017)
EXO-M အဖွဲ့ဝင် Tao ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ IMDb Rating (7.3) ထိရရှိထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “Edge of Innocence” Tao ရဲ့ပွဲဦးထွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်လာမဲ့ Edge of Innocence ကို Shanghai Film Festival မှာ ပြသခဲ့ရာမှာ Feedback ကောင်းတွေအများကြီးရရှိခဲ့ ပါတယ်…. (Tao ပရိသတ်မဟုတ်တဲ့)ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးပြောထား တာကတော့ ဇာတ်လမ်းဟာမျှော်မှန်းထားခဲ့တာထက် အလွန်ကိုကောင်းမွန်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေ တယ်လို့ဆိုပါတယ်…မထင်မှတ်ထားတဲ့ Plot twists တွေအပြင် မူရင်း ဝတ္ထု Summer, the portraits of 19 years old နဲ့ကွဲပြားတဲ့ဇာတ်သွားတချို့ကြောင့် ဇာတ်လမ်းအရှိန်ကပိုမိုကောင်းမွန်သွားတယ်လို့ပြောပါ တယ်..ဇာတ်လမ်းရဲ့ပထမတစ်ဝက်မှာ အပြစ်ရှိသူက ဘယ်သူလဲ လို့လိုက်စဉ်းစားရင်း ဒုတိယတစ်ဝက်ရဲ့ Plot twists ကသူ့ကိုအံ့ဩစေပါတယ်တဲ့… နာမည်ကြီးတရုတ် ဇာတ်လမ်းတွဲဒါရိုက်တာတစ်ဦးက တော့ Shanghai Intl Film Festival မှာကြည့်ခဲ့ ရသမျှထဲEdge of Innocence ဟာ လူငယ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုဖို့သူ Recommend ပေးလိုကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်… တခြားတစ်ဦးကလည်း ဒီဇာတ်လမ်းဟာ သရုပ်ဆောင် အသစ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ မူရင်းဇာတ်အိမ်ခိုင်မာမှုအပြင် သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဇာတ်ကောင်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုတို့ ကိုပါမျှော်လင့်ထားလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်… တခြားရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတချို့ကလည်းဒီဇာတ်ကား ကို positive feedback ပေးထားကြတာကြောင့် ရင်ခုန်စရာပါပဲ.. Edge of Innocence ရုပ်ရှင်ဟာ Japan စာရေး ဆရာ Shimada Soji ရဲ့ Summer, the portraits of 19 years old ကိုရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပြီး Z.Tao, Oral Yang, LiMeng နဲ့ Kelvin Tu တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာက Mystery, Thriller, Romance အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်… Tao ကတော့ ၁၉ နှစ်အရွယ် အားကစားသမားလေး KangQiao အဖြစ်ပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားတာပါ… Edge of Innocence ကို July လ 8 ရက်စပြီး တရုတ်နိုင်ငံတလွှားမှာရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mark your calenders HLs : It’s July 8th. 😀 Tao ကော တခြားသရုပ်ဆောင်တွေကောက ဒီဇာတ်ကားအတွက်အရမ်းကိုကြိုးစားထားခဲ့ကြတာပါ… အေးစိမ့်နေတဲ့ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ ပင်လယ်ထဲကိုအခါခါ ခုန်ချခဲ့ကြရပြီး Tao ဆို စတန့်သမားမပါပဲကိုယ်တိုင် Action scene တွေသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ… (ဆိုင်ကယ် accident အခန်းဆိုအန္တရာယ်များလွန်းလို့ ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရပါတယ်..) ကဲ.. Edge of Innocence ကိုအားပေးကြမယ်နော်? #TaoEOI ထူးခြားချက်တွေအနေနဲ့… -ဇာတ်လမ်းကိုပြသဖို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၁နှစ်ကျော်လောက် ကြန့်ကြာခဲ့ရပါတယ်????? -အေးခဲလှသော chinaရဲ့ ဆောင်းတွင်းမှာ နွေရာသီပုံစံ ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်❄⛄ -minus degree ပြနေသော ရာသီဥတုမှာ အကီၤျလက်ပြတ် ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ပင်လယ်ထဲ ဆင်းရတဲ့အခန်းတွေမှာ ဆိုရင်လည်း ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်? -မင်းသားရော မင်းသမီးရောက ပထမဆုံးအကြိမ် main actorsတွေအဖြစ် စပီးရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် သရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေဟာ သူတို့နဲ့ကိုက်ညီပီး ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကျတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ??? -kiss sceneတွေလည်းပါသလို အဲ့ထက်ပြင်းတဲ့ အခန်းလဲပါဝင်ပါတယ်??? သရုပ်ဆောင်၂ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးရိုက်ကူးမှု ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် wisky သောက်ပီးရိုက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ actor Tao Tao ကပြောခဲ့ပါတယ်? #Hailang ~ ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Time & Tide – Huang ZiTao’s Myanmar Fanpag နှင့် EXO Union Myanmar တို့မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
A Land Imagined(2018)
We need to talk about Kevin (2011)ကျွန်တော်တို့ ကယ်ဗင့် အကြောင်းကို ပြောမှ ဖြစ်တော့မှာ။ကယ်ဗင် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?ကယ်ဗင် ဆိုတာ ကလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်အကြောင်းကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ပြသထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။စိတ်အကြောင်းကို နူးနူးညံ့ညံ့ လှလှပပ ပုံဖော်ထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးPsycho Thriller ကား တစ်ကားပါ။ Thriller ကား ဆိုတဲ့အတိုင်း ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။ကယ်ဗင်ဟာ အထက်တန်းကျောင်း
သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ သူ့အမေ အီဗာကတော့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေ ရေးတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။ကယ်ဗင်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ထိန်းကျောင်းရခက်ပါတယ်။ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တာကအစ လေ့ကျင့်ရခက်ပါတယ်။အမေအပေါ် တွယ်တာပေမယ့် အမေ့ဆီက မေတ္တာကို ကောင်းကောင်း မရရှိခဲ့တဲ့ ကယ်ဗင်ဟာ အမေ့မေတ္တာကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရဖို့ ကြိုးစားရှာပါတယ်။ဒုတိယကလေး မွေးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကယ်ဗင့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းတွေက ပိုမိုနိုးကြားလာပါ
တော့တယ်။သားသမီးနဲ့မိဘကြားက သံယောဇဉ်ကို အသိမ်မွေ့ဆုံးနဲ့ အကြမ်းတမ်းဆုံး တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု၊ ဇာတ်ကားဆု၊ ဇာတ်ညွှန်းဆုနဲ့ ဓာတ်ပုံဆုတွေပါ ရရှိထားတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။IMDb ကတော့ 7.5/10 ရထားပါတယ်။
mmbusticketဗစ်ကရန် ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးဟာ ရော်ရှနီ ဆိုတဲ့ သူ့ကောင်မလေးမှ သူ့ကို လမ်းခွဲစကားကို
ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး ပြောကာ ထွက်သွားလို့ အသည်းကွဲ အရက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့သူပါ။နေ့တိုင်း ညတိုင်း
မူးရူးနေတဲ့ ဗစ်ကရန် ကို နီရှာ လို့ ခေါ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်က ဝန်ထမ်းကောင်မလေးမှ သတိထားမိလာပါတယ်။
တစ်နေ့ ဗစ်ကရန် မူးပြီး ကားမမောင်းနိုင်ချိန် နီရှာ က အိမ်လိုက်ပို့ပေးဖို့ ကားမောင်းပေးပေမယ့်
ဗစ်ကရန် က အိမ်လိပ်စာမပြောသဖြင့် နီရှာ က သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ နီရှာ နဲ့ ဗစ်ကရန်
ရင်းနှီးသွားကြပြီး အသည်းကွဲသမားကြီး ဗစ်ကရန်ရဲ့ အသည်းဟာ တဖြည်ဖြည်းပြန်ဆက်လာပါတော့တယ်။
ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက် နီရှာ ကို ဗစ်ကရန်က သူ နေထိုင်တဲ့ မြို့ရဲ့ဝေးက ဗြိတိသျှလက်ကျန် ခေတ်ဟောင်း စံအိမ်တော်ကြီးဆီကို
ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။နီရှာ ထိုစံအိမ်ကြီးကို ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ထူးဆန်းတဲ့အသံတွေ ခဏခဏ ကြားရပါတော့တယ်။
ထိုထူးဆန်းတဲ့အသံတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ လမ်းခွဲစကားပြောပြီးထွက်သွားတဲ့ ရော်ရှနီ ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက
တကယ်ရော ထွက်သွားတာ ဟုတ်ရဲ့လား ရော်ရှနီ တကယ်တမ်း ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာဒီကားမှာ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
What Death Leaves Behind 2019
အလုပ်ကြိုးစားပြီး ဘဝကိုရိုးစင်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်… တစ်နေ့တော့ သမရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခု မလွှဲသာမရှောင်သာ သူရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်…အဲ့ဒါကတော့ သူ့ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသလိုက်ရတာပါပဲ… ကျန်းမာရေးအဆင်ပြေ နေပေမယ့် အစားထိုးပြီးကတည်းက သူ့ရင်ဘတ်ထဲက ကျောက်ကပ်အကြောင်းကို အချိန်ပြည့်တွေးနေတယ်… သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဟာလည်း သာမန်လူတစ်ယောက်လိုမဟုတ်တော့ဘူး… အဲ့ဒီနောက် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လူသတ်မှုတွေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတယ်… သူနဲ့ ပတ်သက်နေလား ဒီလူသတ်မှုတွေက … ဒီပြသနာအရှုတ်တွေကို သူဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ..ဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ပါဦး
ဘရက်ပစ်ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်လာပါပြီ။ဇာတ်လမ်းနာမည်ကတော့ လက်တင်ဘာသာစကားလုံးကိုယူထားတာဖြစ်ပြီး “ကြယ်တွေဆီသို့” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင် စစ်စစ်ပါပဲ။ဇာတ်လမ်းကတော့ အနာဂတ်ကာလမှာပေါ့။ လူတွေဟာ လကမ္ဘာနဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းက ဂြိုလ်တွေပေါ်မှာစခန်းတွေဆောက်ပြီး သုတေသနတွေ လုပ်နေကြပါပြီ။ဒီ အာကာသ သုတေသနတွေရဲ့ သူရဲကောင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ ကလစ်ဖို့ မက်ဘရိုက်ဟာ အာကာသထဲမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ သက်ရှိတွေကို ရှာဖို့ နေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အဆုံးအစွန်ထိ သွားရင်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။၁၀ နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါ အဲဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ယာဉ်စခန်းကနေ ကမ္ဘာနဲ့ဂြိုလ်တွေအားလုံးကို အန္တရာယ်ပေးမယ်စွမ်းအင်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ဒေါက်တာ မက်ဘရိုက်ကို ရှာဖို့ သူ့ရဲ့ သားဖြစ်သူဗိုလ်မှူး ရွိုင် မက်ဘရိုက်က အာကာသထဲကို စွန့်စားခန်းဖွင့်ရပါတော့တယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ အာကာသထဲကို ခရီးသွားတာတွေကိုသဘာဝကျကျမြင်ချင်ရင်၊ အခက်အခဲတွေကိုရင်တမမနဲ့ ကြည့်ချင်ရင် ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်မျိုးပါပဲ။
ဒီကားလေးကတော့ ဘရာဇီးလူမျိုးတွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့စိတ်ကူးယဥ်ဆန်ဆန်ဒရမ်မာအက်ရှင်ကားလေးတစ်ကားပါထရစ်ဇာက သူမအဖွားသေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဘာကူယာရွာလေးကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူမအဖွားစျာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ပေါ့ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဘာကူယာလို့ခေါ်တဲ့ ကျေးရွာလေးက ဘရာဇီးမှာရှိတယ်လို့စိတ်ကူးယဥ်ပုံဖော်ထားတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာပေါ့ဘာကူယာရွာလေးမှာ သေရေးရှင်ရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းနည်းလာခဲ့တယ်နောက်ပြီးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမမိတော့ဘူးဖြစ်ခဲ့တယ်အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့အစိုးရကလည်း ရွာလေးကို ပစ်ပယ်ခဲ့တယ်ဘာကူယာရွာလေးဟာ မြေပုံထဲကနေဖျောက်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ် နောက်ပိုင်းမှာရွာလေးဟာဘယ်လိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့လဲရွာမှာရှိတဲ့နယ်ခံတွေကရောဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကနေဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုပဟေဠိဆန်ဆန်ကြည့်ရှု့ရမှာပါ
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Freya Tingleyနဲ့ Simon Abkarianတို့က အဓိကပါဝင်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့Rose Fisherက နာမည်ရခါစ တယောပညာအဖြစ်အသက်မွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ အဖေRichard Marloweဖြစ်သူက ဆုံးပါးသွားတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။ အဖေဖြစ်သူက ငယ်ငယ်လေးကတည်းမိသားစုကို ပစ်ပြီး ရုတ်တရတ်ထွက်ထားခဲ့တဲ့အတွက် အဖေက သူ့ဘဝမှာမလိုအပ်ဘူးလို့ နှုတ်ကပြောနေပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ မေတ္တာစိတ်ကရှိနေဆဲပေါ့။ဒီလိုနဲ့ ရှေ့နေနဲ့သွားတွေ့တော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူပစ္စည်းတွေရယ်၊ နောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်ကအိမ်သော့ကို လွှဲပေးလိုက်တော့ အဲ့အိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူအဖေဘယ်သူမှမပြောခဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေက ဘယ်လိုအသက်ဝင်လာမလဲ။သူအေးဂျင့်ဖြစ်တဲ့ Charles Vernaisကလဲ ဘယ်လိုတွေကူပေးရပြီး သူ့အကူအညီက ကောင်းရာဘက်ကို ဦးတည်သွားမလား… နှစ်ယောက်သားဘယ်လိုဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ Latvian National Film Award Lielais Kristaps for Best Fiction Film Cinematographerဆုရထားတဲ့ ကားလေးမို့ ပိတ်ကားပေါ်မှာ အတူစီးမျောကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်…
စီပွားရေးလောကမှာ အောင်မြင်ပြီး သြဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် အလောင်းခွဲစိတ်စစ်ဆေးဖို့ သူ့အလောင်းကို ရင်ခွဲရုံပို့ထားတဲ့အခါ ညဘက်ကျတော့ အလောင်းပျောက်သွားပါတယ်ညစောင့်ပြောတာတော့ အလောင်းပြန်ရှင်လာပြီး ထသွားတာတဲ့ဒါပေမဲ့ တာဝန်ကျရဲမှူးကြီးကတော့ သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူ အဂျေးပူရီကိုပဲ သံသယဝင်နေပါတော့တယ်ထိုညမှာ ရဲမှူးကြီးနဲ့ အဂျေးပူရီတို့ မာယာဗာရ်မားရဲ့အလောင်းကို ရှာတွေ့ပါ့မလားဘယ်လိုအလှည့်အပြောင်းတွေ ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ အားလုံးပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါအထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထွက် The Body ကို Remake ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်သည့်အတွက်
ဇာတ်လမ်းစတဲ့ ၁၈၂၁ ခုနှစ်မှာ အခုအမေရိကန်နိုင်ငံ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟာ စပိန်လက်အောက်ခံပြည်နယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဒေသတွေကို မက္ကဆီကိုနဲ့စပိန်တို့က တလှည့်စီအုပ်စိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအဖွင့်မှာတော့ ကာလီဖိုးနီးယားကို စပိန်တွေလက်ထဲက မက္ကဆီကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်တာအန်နာက ပြန်သိမ်းတော့မှာကြောင့် စပိန်မြို့တော်ဝန် ဒွန် ရာဖေယဲလ် မွန်တယ်ရို ထွက်ပြေးတော့မယ့်အခန်းနဲ့စပါတယ်။ အဲဒီ ဒေသကို စပိန်တွေအုပ်စိုးခဲ့စဉ်တစ်လျှောက် ပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဇောရိုးဆိုတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်လူစွမ်းကောင်းက စပိန်အစိုးရကို တော်လှန်ပြီး ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒွန် ရာဖေယဲလ်ဟာ ထွက်ပြေးခါနီးဆဲဆဲမှာ ဇောရိုးကို သုတ်သင်နိုင်ဖို့ အစီအစဉ် တစ်ခုဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသားတို့ ညီအကိုက ကူညီပေးခဲ့လို့ အသက်အန္တရာယ်က လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒွန် ရာဖေယဲလ်ဟာ ဇောရိုးဘယ်သူလည်းလို့ ရိပ်မိသွားလို့ သွာဖမ်းတဲ့အခါ ဇောရိုးတစ်ဖြစ်လည်း စပိန်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်တဲ့ ဒွန် ဒီယေဂိုဟာ ချစ်လှစွာသော ဇနီးသည်ကိုဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင် သမီးလေးကိုလည်း ရန်သူရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ထောင်ထဲမှာ အနှစ် ၂၀ လောက် အကျဉ်းချခံတဲ့ ဘဝကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါက ပထမပိုင်းဇာတ်လမ်းပါ။ ဒုတိယပိုင်းဇာတ်လမ်းကတော့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက်အကြာမှာ ကာလီဖိုးနီးယားကို စပိန်တို့ ပြန်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်အဖြစ် ဒွန် ရာဖေယဲလ်ပြန်ရောက်လာပြီး ပြည်သူတွေကို မညှာမတာနှိပ်စက်ကာ ရွှေထုတ်ယူရာမှာ အသုံးချ ခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းကျနေခဲ့တဲ့ ဒွန် ဒီယေဂိုလည်း လွတ်မြောက်အောင် ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး သူ့ကိုကူညီခဲ့ဖူးတဲ့ ညီအကိုနှစ်ယောက်တည်းက ညီဖြစ်တဲ့ မင်းသားနဲ့တွေ့ပြီး ဇောရိုးဘဝကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ကာ ပြည်သူတွေကို ပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
စွယ်တော်မှာ ရှိရှိသမျှ (၉၆)ပါးသော ရောဂါများအားလုံးပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်း အပါအဝင် ထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ဒဏ္ဏာရီလိုလို ပုံပြင်လိုလိုတွေ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူများအဖွဲ့ တစ်ခုမှ အလှည့်ကျ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် တယ်လို့အဆိုလည်းရှိပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက ရေရေရာရာမရှိတဲ့ ဒဏ္ဏာရီလို လို ယုံတမ်းစကားလိုလို တွေပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ သေလုမြောပါးဖြစ်နေတဲ့ သမီးငယ်လေးအတွက် စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲ ဖြစ်နေသော ဖခင်တစ်ယောက်က သမိုင်း ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိန်း ထံတွင် မြတ်စွယ်တော်ကို ရှာဖွေဖို့ လာအကူအညီ တောင်းသောအခါ………။ အက်ရှင်ကားကြိုက်သူများ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ နင်ဂျာတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ခံယူချက်၊ အောက်လမ်းပညာ အသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ရှုစားကြရမှာပါ။
Parallel World Love Storyက စာရေးဆရာ Keigo Higashino ရဲ့ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ Yoshitaka Mori ကရိုက်ကူးထားတာပါ။Mayuko အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသမီး Riho Yoshioka ဟာဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲ 2019 Newcomer of the Year Awardကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Parallel World Love Storyဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း“Parallel Universes” သဘောတရားကိုအခြေခံပြီး မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာနှစ်ခုကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ခင်မင်မှုတွေကို ပုံဖော်ထားပါတယ်။ Takashi နဲ့Tomohiko ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ မိန်းကလေး Mayuko တို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။မိမိကောင်မလေး Mayuko က တခြားမျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာမှာ သူငယ်ချင်းTomohiko ရဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်နေတဲ့အခါTakashi ရဲ့ စိတ်တွေရှုပ်ထွေးလာပါတော့တယ်။မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာနှစ်ခုက မတူညီတဲ့ဘဝနှစ်ခုမှာဘယ်အရာက အစစ်အမှန်လဲဆိုတာကို Takashiတစ်ယောက်ဘယ်လိုဖော်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။တစ်မူထူးကဲတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းတွေကိုမှ နှစ်သက်ကြရင်ဒီ Parallel World Love Story ကို ကြည့်ဖို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးသို့ အမျိုးသမီးလူနာတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာသည်။ လူနာဖြစ်သူက သူ့ကလေးကို သူ့ထံမှ လူတစ်စု အတင်းယူသွားကြောင်း ကလေးကို ပြန်ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း တွင်တွင်ပြောနေသည်။ ဆရာဝန်များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ အမျိုးသမီးလူနာမှာ မကြာမီ က ကလေးအသေမွေးထားသောကြောင့် ကယောင်ခြောက်ခြားဖြင့် ပြောဆိုနေသော စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဝေဒနာရှင် သာဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာကောက်ချက်ချကြသည်။ လူနာရဲ့ ခိုင်လုံသော ပြောဆိုချက် များကြောင့် ဆရာဝန်များအားလုံးက လက်မြှောက်ကာ စိတ်ပညာကုထုံးပညာရှင် ဒေါက်တာဂျက်ကီ ဒီလုပ်စ်ကို အကူအညီတောင်းကာ အဖြေထုတ်ခိုင်းလိုက်သည်။ လူနာဖြစ်သူနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြည့် ရင်း ဒေါက်တာဒီလုပ်စ်သည် အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို အစဆွဲထုတ်နိုင် လိုက်သောအခါ………။ ဆရာဝန်များရဲ့ ကောက်ချက်နှင့် အမျိုးသမီးလူနာ၏ တကယ့်အဖြစ်အပျက် မည်သူက မည်မျှထိ မှန်ကန်နိုင်ပါမည်နည်း? ။ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ပက်သက်ပါသနည်း?။ ဆိုက်ကို ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများ အကြိုက်တွေ့နိုင်သော ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ မူရင်းဝတ္တုဟာ The Firm တို့ A Time To Kill တို့ Rain Makerတို့လို နာမည်ကျော် Legal Thriller တွေပဲရေးခဲ့တဲ့ John Grisham ပါ။ သူရဲ့ ပထမဆုံးဝတ္တု A time to killဟာ၂၀၁၂အထိ စစ်တမ်းအရ ၂၇၅သန်းအထိ ကော်ပီရောင်းရပြီးပါပြီ။ ဒီနောက်ရေးတဲ့ The Firm ဟာ Best Seller စာရင်း ဝင်ခဲ့ပြီး သူ့ကို စအောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ Legal Thrillerဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကပဲ CM မှာ တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္တုတစ်ပုဒ်ကိုပဲ Julia Roberts နဲ့ Denzel Washington တို့လို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ The Pelican Brief ဆိုတဲ့ ကားနဲ့ ထပ်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဗဟိုတရားရုံး ဂျူဒီ နှစ်ယောက်ကို Khamelလို့ အမည်တွင်တဲ့ လူလတ်သမားတစ်ယောက်ဟာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သွားပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်အပြီး နှစ်နှစ်တာ အကြာမှာ Tulane တက္ကသိုလ်က ရှေ့နေကျောင်းသူ Darby Shaw ဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာလို့ သူတို့ အသတ်ခံရလဲဆိုတာကို သီအိုရီထုတ်ပြီး လျှောက်လဲချက်တစ်ခု ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလျှောက်လဲချက်ကို သူမရဲ့ ဥပဒေပါမောက္ခကို ပေးခဲ့ပြီး သူ့ဆရာက Gavin Verheek ဆိုတဲ့ FBI ဒါရိုက်တာ ရဲ့အထူးရှေ့နေတစ်ယောက်ကို မူပွား ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ.. ပါမောက္ခဟာ ဗုံးခွဲအသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Darby ကိုယ်တိုင်လည်း တိုက်ခိုက်မှူ တစ်ချို့ ုကြုံရပြီးတဲ့အခါ သူ မသေအောင်ရှောင်ဖို့ လုပ်ရပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲ သူ သီအိုရီ ထုတ်ထားတဲ့ လျှောက်လဲချက်ဟာ မမှားလို့ သူ့ကို လုပ်ကြံဖို့ ကြံစည်နေကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူမ ပုန်းကွယ်ပြီး Verheek ဆီက အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါသတဲ့..။တစ်ဖက်မှာ Garciaလို့ သူ့ကိုယ်သူ ခေါ်တဲ့ သတင်းပေးတစ်ယောက်ဟာ သတင်းထောက် Gray Granthamကို လုပ်ကြံမှုတွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းပေးပြီး ချက်ချင်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ ဒီနောက် Darby ဟာ သူ့ လျှောက်လှဲချက်တွေ မှန်ကန်တာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်နဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ Darby ဟာ ထပ်အတိုက်ခိုက်ခံရပြီး လွတ်မြောက်သွားပေမဲ့ သူ့ကွန်ပျူတာ ဖိုင် ဒေတာတွေ အကုန်ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့တယ်။ Verheek နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်တဲ့အခါလည်း Verheek အသတ်ခံခဲ့ရပြီး လူသတ်သမားက အယောင်ဆောင်လာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဆီကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ ကျည်တစ်တောင့်က သူ့ အသက်ကို ကယ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။Grantham နဲ့ Darbyတို့ နယူးယောက်မှာ တွေ့ကြပြီး သူရဲ့ Palican လျှောက်လဲချက်ထဲက ခန့်မှန်းချက်တွေ အကြောင်း Granthamကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Granthamကလည်း သတင်းပေးလူအကြောင်းပြောပြရရင်း သတင်းပေးတဲ့လူကို သူကို သူတို့သိပြီးတဲ့အခါ…. သက်သေဘယ်လိုရှာရင်း သူရဲ့ Palican လျှောက်လဲချက်ကို ဘယ်လို သက်သေပြမလဲ ဘယ်လောက်ထိ အဆင့်မြင့်တဲ့ အုပ်ချူပ်ရေးပိုင်းက လူတွေပါပါနေလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကြည့်ရှုရင်ခုန်လိုက်ကြပါ….။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ မူရင်းဝတ္တုရေးဆရာ John Grishmanဟာ ရှေ့နေလည်းဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဖြစ်လဲ စာရေးဆရာလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့ Legal Thriller ဝတ္တုတွေဟာ သေသပ်ပြည့်စုံပါတယ်။ သူ့ စာအုပ်ကို ရိုက်ထားတဲ့ Julia Roberts တို့ Danzel Washington တို့လို လူတွေ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားဟာလည်း Rating မများလှပေမဲ့ ကားကောင်းတစ်ခုမို့လို့ ပြန်လည်တူးဖော် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ ဘောလီဝုဒ်ဖန်တွေအတွက် ၂၀၁၉ ထွက် Crime, Mystery ဇာတ်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပါဝင်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း နာမည်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ Emraan Hasmi နဲ့ Rishi Kapoor တို့ အပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတာပါအထူးသဖြင့် မင်းသမီးရဲ့အက်တင်တွေကလည်း အတော်လေးကို ကောင်းလှပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ စီပွားရေးလောကမှာ အောင်မြင်ပြီး သြဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် အလောင်းခွဲစိတ်စစ်ဆေးဖို့ သူ့အလောင်းကို ရင်ခွဲရုံပို့ထားတဲ့အခါ ညဘက်ကျတော့ အလောင်းပျောက်သွားပါတယ်ညစောင့်ပြောတာတော့ အလောင်းပြန်ရှင်လာပြီး ထသွားတာတဲ့ဒါပေမဲ့ တာဝန်ကျရဲမှူးကြီးကတော့ သူ့ယောက်ျားဖြစ်သူ အဂျေးပူရီကိုပဲ သံသယဝင်နေပါတော့တယ်ထိုညမှာ ရဲမှူးကြီးနဲ့ အဂျေးပူရီတို့ မာယာဗာရ်မားရဲ့အလောင်းကို ရှာတွေ့ပါ့မလားဘယ်လိုအလှည့်အပြောင်းတွေ ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ အားလုံးပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါအထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထွက် The Body ကို Remake ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်သည့်အတွက်မူရင်းဇာတ်ကားကြည့်ပြီးသူများ ဇာတ်လမ်းကို စပွိုင်းမလုပ်ကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ
Dangerous Lies(2020)Netflixက​နေ မကြာ​​သေးခင်ကမှ ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒီကားက​တော့ ​တော်​တော်​လေး စိတ်၀င်စားဖို့​ကောင်းတယ်လို့ကို​ ​ပြောလို့ရပါတယ်။ ​ကေတီ နဲ့ အဒမ် တို့ဟာ လူငယ်ဇနီး​​​မောင်နှံ​တွေဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ​ငွေ​​ရေး​ကြေး​ရေး အခက်အခဲ ​တော်​တော်​လေးရှိ​နေကြပါတယ်။​ကေတီဟာ ၈၈နှစ်အရွယ် အဘိုးအို တစ်ဦးကို ပြုစု​စောင့်​ရှောက်​ပေးရတဲ့ caretaker တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ​ငွေ​ကြေးပြည့်စုံတဲ့ တ​ကောင်ကြွက် အဘိုးအို တစ်​​ယောက်ဖြစ်ပြီး ခမ်းနားတဲ့ အိမ်ကြီးမှာ ​ နေထိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကေတီ အလုပ်၀င်ပြီး ​လေးလအကြာမှာတင် အဘိုးကြီးဆုံးပါးသွား​တော့အံ့သြစရာ​ကောင်း​လောက်​​အောင် ​ကေတီက အိမ်ကြီးကို အ​မွေ​ဆက်ခံခွင့်ရခဲ့ပါ​တော့တယ်။ဒီမှာပဲ ဇာတ်ခမ်းစပါ​တော့တယ်။ သူအ​မွေရခဲ့တဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ ဘာ​တွေများရှိ​နေမလဲ။ဒီအိမ်ကြီးကို အ​ကြောင်းပြုပြီး သူတို့လင်မယားနှစ်​ယောက် ဘယ်လိုဒုက္ခ​တွေကြုံ​တွေ့ရမလဲ။ဆင်းရဲရတဲ့ ဒုက္ခနဲ့ ချမ်းသာရတဲ့ ဒုက္ခဟာ ဘာ​တွေများ ကွာခြားမလဲ အမျိုးမျိုး​သော အဖြစ်အပျက်​တွေနဲ့အတူ ​နောက်ဆုံး ရဲ​တပ်ဖွဲ့ကပါ ​​ခြေချင်းလိမ်လာတဲ့ အခါမှာ​တော့.... Netflixထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လမ်းက အလှည့်အ​ပြောင်း​တွေနဲ့ အ​တော် မြိုင်ဆိုင်တာကို​တွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဒီကားမှာ​တော့ မင်းသမီး Camila Mendesရဲ့ သရုပ်​ဆောင်မှု​တွေက အပိုအလိုမရှိ ​ကောင်းလွန်း​နေတာကို ​မြင်တွေ့ရမှာပါ။ Drama, Mystery, Thrillerရသ​ပေါင်းစုံ ခံစားရမယ့် ​ကား​ကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
Atonement (2007) ဟာ IMDb 7.8/10 Rotten Tomatoes 83% Metacritic 85% Google users 90% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Joe Wright ရိုက်ကူးထား၍ Ian McEwan, Christopher Hampton က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Keira Knightley, James McAvoy, Brenda Blethyn တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Mystery, Romance ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… စိတ်ကူးယဉ် စာရေးဆရာမ ဘရီယိုနီ တောလစ်ဟာ သူ့အသက် ဆယ့်သုံးနှစ်အရွယ်က သူ့အစ်မရဲ့ ချစ်သူ မကျူးလွန်တာကို စွတ်စွဲလိုက်မှုကြောင့် ဘဝတွေ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲကုန်တာကို ဘယ်လို ဒရာမာ လျှို့ဝှက်သည်းဖို နဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှု ခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…
A perfect plan(2020) Kate Paxton ဟာ အလွန်​တော်တဲ့ safe cracker တစ်​ယောက်ပါ။ တစ်​နေ့သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာ သူဟာ အခြားထင်ရှားတဲ့သူခိုးသုံး ဦး နှင့်အတူခိုင်ခံ့တဲ့ဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာအကျဉ်းကျနေပါတယ် ။ ပြီးပြည့်စုံသောစိန်ကို ရယူနိုင်ဖို့အတွက် လူတစ်​ယောက်က သူတို့ ၄ ​ယောက်ကို ဓါးစာခံအဖြစ်အသုံးချခဲ့တာပါ။ စိန်ကိုရဖို့အတွက် အဲ့ဂို​ခေါင်ထဲမှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးအဆင့်ပေါင်းများစွာကို ​ကျော်ဖြတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု​တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး တူတူလုပ်ကြရမှာပါ။ဒ ါ​ပေမယ့် သူတို့​လေး​ယောက်ဟာ အချင်းချင်းယုံကြည်ကြဖို့နဲ့ သစ္စာရှိကြဖို့​တော့လိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အထက်လူက ​စောင့်ကြည့်​နေပါတယ်။ သူတို့ ၄ ​ယောက်အတူ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အစီအစဥ်တစ်ခုကိုချပြီး စိန်တုံးကို ဘယ်လိုအရယူမလဲဆိုတာရယ် သူတို့ကိုခိုင်း​စေ​ခဲ့တဲ့သူကို စိန်တုံး​တွေမ​ပေးပဲ ဘယ်လိုလှည့်စားသွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရမှာပါ။
Awoken (2020) ကယ်လာ နှင့် ဘလိတ်ခ်ဆိုတဲ့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်။ ဘလိတ်ခ်ကတော့ မျိုးရိုးလိုက်တာလို့ပြောလို့ရတဲ့ အိပ်စက်မရတဲ့ရောဂါကို ခံစားနေရသူပါ။ သူတို့ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ဒီရောဂါကြောင့် ဖခင်ကို သတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။ ကယ်လာဟာ ဒီအဖြစ်ဆိုးကနဲ့ သူ့အစ်ကိုဖြစ်သူကို ကယ်ဖို့ သူတတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆေးပညာနဲ့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ သို့သော် ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေကပါ လက်လျော့လိုက်တဲ့အခါ…ကယ်လာဟာ သူ့ဖခင်ရဲ့ သူငယ်ချင်ူအကူအညီ၊ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကူအညီနဲ့ ဘလိတ်ခ်ကိုကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်.. ဒါကတော့ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းလေးပေါ့နော်။ တကယ်တော့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေရဲ့အောက်မှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ နှစ်မြှုပ်နေပါသေးတယ်။ ကယ်လာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဘလိတ်ခ်ကို ကုသရင်း ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အဖြစ်မှန်တွေကို တဖြည်းဖြည်းသိရှိလာကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အတိတ်ကအကြောင်းတွေ၊ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့နည်းတွေ ရှာတွေ့ပါ့မလားဆိုတာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။ သည်းထိပ်ရင်ဖိုကားမလို့ တစက်လေးမှ မပျင်းရပါဘူးနော်။ ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။ Translator ကတော့ မျက်စိကို အသားကုန်မှိတ်ပြီး ကြည့်ခဲ့ရတာပါနော်။ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့မို့ မဖြစ်မနေကြည့်ရှုကြပါဦးလို့…
Gone Baby Gone (2007)IMDB- 7.7/10 ….Rotten…94%ရရှိထားတဲ့ Crime/Drama ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ ဒါရိုက်တာကတော့ Good Will Hunting နဲ့ လက်စွမ်းပြထားတဲ့ Ben Affleck ဖြစ်ပါတယ်(Morgan Freeman ကြီးကိုလည်း သူနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ခပ်လေးလေးစကားလုံးတွေကို ပြောရင်း တွေ့ရဦးမှာပါ)ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင် ဒီမေးခွန်း(၂)ခုကို ဖြေကြည့်ကြပါဦး(၁) ဘယ်သူက မှန်လဲ? (၂) မှန်ကန်တဲ့အဖြေဆိုတာရော ရှိခဲ့လား? ဒီတစ်ခါ Review ကို မရေးဘဲ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်အချိ့ ခံစားရှုမြင်ခဲ့တဲ့အပေါ် Spoil မဖြစ်စေအောင် ရှောင်ရင်း ဘာသာပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…(A) Gone Baby Gone ဟာ ကလေးသူငယ်ပြန်ပေးမှုအကြောင်းနဲ့ အဲဒါတွေက ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ဘဝတွေ အကြောင်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဇာလမ်းက ရှည်လျားဟန်ရှိပေမယ့် အစကနေအဆုံးထိ ပျင်းစရာ ကောင်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။ဇာတ်ကားရဲ့အဆုံးသတ်ဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပြောဆိုငြင်းခုန်စရာအကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ် ကျန်နေခဲ့မှာပါ။(B) ဒီဇာတ်ကားက တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုကို ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Ben Affleck ဟာ ဘော်စတွန်မြို့ရဲ့လမ်းမပေါ်က ဘဝတွေကို တင်ဆက်ပြသတတ်သူပါ။ ဇာတ်ကားက မကောင်းပါဘူးလို့ ပြောမိမယ့် အချိန်တွေမှာ သူပေးချင်တဲ့ Message တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ထုတ်ပြသွားပါတယ်။Ben ဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အာရုံကို ဘယ်အချိန်မှာ ဖမ်းစားရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိပုံပေါ်တဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ကျွန်တော့်ကို မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပါတယ် “ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်ဆိုတာ၊ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်လုပ်ရမယ်လို့ ပြောတာလား” “မှန်မယ်၊ မမှန်ဘူးဆိုတာ နောက်ဆုံးမှာ ရသွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကြည့်ပြီးပြောမှာလား”(C) ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ရိုးသားခြင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုလှလှပပဖော်ကျူးပြီး တစ်ဆက်ထဲမှာပင် ဘဝရဲ့အလှတရားတွေကို ဂရုမစိုက်တော့ကြတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကို ရိုက်ပြထားတာပါ။ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ကလေးသူငယ်တွေကို ဒီထက်ပိုပြီး ကြင်နာမယ်၊ စာနာမယ်၊ မေတ္တာထားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ဟာ ရင်ဘတ်ဗလာနဲ့ လူသားတွေပါပဲ
L A Confidential(1997)
L.A. Confidential(1997)IMDb….8.3…..Rotten…99ဒီကား မှာ အဓိကမင်းသား ၃ယောက်ပါတယ်…Russell Crowe,Kevin Spaceyနဲ့ Guy Pearce ရယ်…သူတို့တွေသရုပ်ဆောင်ကောင်းကြသလို နာမည်ကြီးအထင်ကရကားတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တာကို တော်တော်များများသိကြမယ်ထင်တယ် .. သူ့တို့(၃)ယောက်ဟာ စုံထောက်ရဲအရာရှိတွေပါ…ဇာတ်ကားအစမှာ သူတို့(၃)ယောက်ရဲ့ခံယူချက် အလုပ်အပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားတွေကို တဖြည်းဖြည်းပြသွားတယ်….အဲ့ဒီ အခန်းတွေပါးပါးလေးပြသပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူသတ်မှု ကြီးဆီရောက်သွားတယ်..လူသတ်မှုကြီးဟာ စုံထောက်ရဲအရာရှိဖြစ်တဲ့ သူတို့(၃)ယောက်ခေါင်းပေါ်ရောက်လာပါတယ်…လူသတ်မှုဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာ ရက်ရက်စက်စက်ပစ်သတ်ခံလိုက်ရတာပါ…သေဆုံးသူတွေထဲမှာ ရဲစုံထောက်တစ်ယောက်တောင်ပါ ပါတယ်…. ကြည့်ရှူတဲ့သူဟာ ဇာတ်ကောင် ၃ ယောက်နောက်ကိုအပြေးအလွှားလိုက်ရ သလို ဘယ်သူသတ်လဲပါ တစ်ဆက်ထဲ အဖြေထုတ်နေရတ ယ်… လူ(၃)ယောက်ရဲ့အမြင်ကိုခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲ ခံစားရင် အမှုကိုလည်းလက်လှမ်းမှီသလောက်ခင်ဗျားဟာ ကော်ဖီပူပူနွေးနွေးလေးသောက်ရင်း အတွေးတွေ လွန့်လူးနေလိမ့်မယ်…နောက်တစ်ခုက ဒီကားကြည့်နေစဉ် ဇာတ်ကောင်တွေနာမည်တွေကို အသေအချာလေးမှတ်ပြီး ကြည့်သင့်ပါတယ်…ဘာလို့ဆို အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များနဲ့ဇာတ်ကောင်နာမည်တွေဟာ စကားပြောခန်းတွေနဲ့ပုံဖော်ထားလို့ပါ..ပြီးတော့ ဒီကားထဲက မင်းသမီး kim Basinger က အော်စကာ(ဇာတ်ပို့ဆု)ရရှိခဲ့သလို အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွန်းဆုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်.. နောက်တစ်ခု ခင်ဗျားတို့ သတိထားမိမှာက Russell Crowe ရဲ့ မျက်လုံးတွေပါပဲ…သူ့မျက်လုံးတွေက ယုန်ငယ်လေးဟန်…ပြောရရင် Beautiful mind ကားထဲက ပါမောက္ခတစ်ယောက်ရဲ့ဟန်ပန်..သူ့ရဲ့ ပင်ကိုယ်ဟန်ပဲလား မသိ…သို့ပေမယ့် အဲ့မျက်လုံးတွေကနေ အချိန်တော်တော်များများ မုန်ယိုနေတဲ့ ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်လိုပေါက်ကွဲရက်စက်ပြတာ.. ဒီဘဲကြီးသရုပ်ဆောင်တာ လန်းလှချည်လားလို့ ခင်ဗျားတို့ မှတ်ချက်ချမိမှာ အသေအချာပဲ
Tigers are not afraid 2017 Aladdin ဇာတ်ကားထဲကလို ဆု‌ေတာင်း3ခုသာ တောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင် သင်တောင်းမယ့်ဆုက ဘာများဖြစ်မလဲ သရဲကားတော့မဟုတ်ပေမယ့် ဝိဥာဉ်ဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ 2006ခုနှစ်က မက္ကဆီကို မြို့တစ်ချို့မှာ မူးယစ်ဆေးကြောင့် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး လူတွေ များစွာသေဆုံးကြတယ်။ အဲ့မှာ မကျွတ်မလွတ်တဲ့ ဝိညဉ်တွေလည်း ရှိနေတာပေါ့။ Estrella ဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ ရုတ်တရက် သူ့အမေပျောက်သွားတယ်။ သူ့လိုပဲ မိဘမရှိတော့တဲ့ ကလေးတစ်စုလည်း ရှိနေတယ်။ သူလည်းတစ်‌ေယာက်ထဲ ကြောက်တာနဲ့ အဲ့ကလေးတစ်စုနဲ့အတူ သွားနေလိုက်တယ်။ ထူးဆန်းတာက ဆရာမက Estrella ကို ဆုတောင်း3ခုတောင်းဖို့ ပြောထားတယ်။ ပုံပြင်တွေထဲကလိုပေါ့။ အဲ့ဆုတောင်းက လက်တွေ့မှာ တကယ်ဖြစ်နိုင်မလား ဆိုတာကတော့ စိတ်၀င်စားစရာပါ။ ကလေးအုပ်စုထဲမှာတော့ Shine ဆိုတဲ့ကောင်လေးက အစားအစာတွေကို ခိုးပြီး ကျန်တဲ့အငယ်တွေကိုကျွေးတယ်။မြို့က မြို့ပျက်လိုဖြစ်နေတော့ ခိုးရတာလည်း လွယ်တယ်။ တစ်နေ့ သူခိုးလာတဲ့ထဲမှာ ဖုန်းပါလာတယ်။ အဲ့ဖုန်းကြောင့် အမတ်လောင်းဖြစ်တဲ့ Chino က သူတို့ကို အလိုရှိနေတယ်။ အမတ်လောင်းနဲ့ ဒီဖုန်းနဲ့က ဘာတွေ ပတ်သက်မှု‌ရှိနေတာလဲ။ သူတို့လေးတွေကကော အမတ်လောင်းလက်ထဲကနေ လွတ်နိုင်ပါ့မလား။ ကလေးတွေကို အဓိက ဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ ကြည့်ရမှာမို့ ကလေးဇာတ်ကား ကြိုက်သူများနဲ့ ဝိဥာဉ်‌ကားတွေ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ကျေနပ်မှု ရစေမယ့် ကားကောင်းလေးပါ။
Inheritance 2020 အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ inheritance ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးဟာဆိုရင် ကွယ်လွန်သွားတဲ့အဖေဖြစ်သူဆီကနေ ရရှိလာတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အမွေကိုဆက်ခံရတဲ့ သမီးတစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ် လော်ရင်းမွန်ရိုးဟာ အဖေစီးပွါးရေးသမား အမေရှေ့နေဟောင်း မောင်လေးနိုင်ငံရေးသမားတို့ရှိတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြီးမွန်ရိုးမိသားစုက သမီးကြီးရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် လော်ရင်းဟာ အဖေရဲ့သဘောကျ မိသားစုအလွတ်တန်းရှေ့နေမလုပ်ဘဲ ဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတွေဘက်ကရပ်တည်တဲ့ မြို့နယ်ကိုယ်စားပြုဥပဒေမှူးဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့် ဖ ခင်ဖြစ်သူနဲ့အမြဲလိုလိုရန်စကားတွေပြောနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်တော့သူမဖခင်ဟာ ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ် သူမအဖေရဲ့သေတမ်းစာဖတ်ပွဲမှာလော်ရင်းဟာ သူမအမေနဲ့မောင်ထက်စာရင် အမွေရတဲ့အရေအတွက်ဟာနည်းပါးလွန်းပေမယ့် သူမကဗွေမယူခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူမဖခင်ရဲ့ရှေ့နေဟာ သူမဖခင်က သူမအတွက်သီးသန့်ထားခဲ့တဲ့စာအိတ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိုက်ရပါတော့တယ် အဲ့ထဲမှာတော့ သူမဖခင်ဟာ သူမအတွက်ခြောက်ခြားစရာအမွေတစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့ပြီး သူမဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကို တုန်လှုပ်စွာရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတော့တယ် လော်ရင်းဟာ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုကြုံရမလဲ ဥပဒေဘက်တော်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီကားထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Body Cam(2020) ဒီတခါတော့ ရဲကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကားလေးကတော့ ရန်နီဆိုတဲ့ ရဲအမျိုးသမီးရဲ့ အမှုလိုက်တဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အချိန်ကာလကတော့ ရဲဌာနဟာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ ပစ်ခတ်မိလို့ ရဲနဲ့ ပြည်သူအကြား တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်နေချိန်ပါပဲ။ ရန်နီဟာ သူမသားကို ဆုံးရှုံးပြီးနောက် အလုပ်မှာ ပြဿနာတက်လို့ ရာထူးအနားခံရရာကနေ ပြန်လည်အလုပ်စဝင်တာပါ။ သူမ အလုပ်ဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲ သူမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်အသတ်ခံရပါတယ်။ ရန်နီဟာ သူမရဲ့ ခင်မင်ရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဆုံရှုံးရတာကို လက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ရန်နီ သံသယဖြစ်နေတဲ့ တရားခံကို အထက်နဲ့ စုံထောက်ဖက်က လက်မခံချိန်မှာတော့ ရန်နီဟာ သူမကိုယ်တိုင်ပဲ အမှုကို စုံစမ်းပါတော့တယ်။ နောက်ကွယ်က တိမ်မြှုပ်နေတဲ့ လက်သည်ကိုရှာဖွေရင်း မထင်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ…. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမို့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်။
IMDb Rating (8.4/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (95% ) ရရှိထားပါတယ်။(Raiders of the Lost Ark ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ နာဇီတွေ အသဲအသန်လိုက်ရှာနေတဲ့ ဒီသေတ္တာလေးဟာ သူတို့ရန်သူတော် ဂျူူ းတွေရဲ့ ဘာသာရေးပစ္စည်းပါ။ Torah နဲ့ Bible ကျမ်းစာတွေအရ ဒီသေတ္ကာလေးကို ပညတ်တော် (၁၀)ပါးကို ရေးထားတဲ့ ကျောက်တုံးနှစ်တုံး ထည့်ဖို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်က ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဂျူူ းတွေ အီဂျစ်ကနေ မြေထဲပင်လယ်ကိုဖြတ်၊ ဘုရားသခင်(ဂျူးအခေါ်ဂျေဟိုးဗ)ကတိပြုထားတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ခုဆီးရီးယားကျွန်းဆွယ်ကို သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဒီသေတ္တာက အခက်အခဲဟူသမျှကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်လို့ မှတ်တမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေရော၊ ဂျုးတွေပါ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဒီပစ္စည်းဟာ ဘီစီ ၅၉၇၊ ၅၈၆နှစ် ဘေဘီလိုနီးယန်းတွေ ဂျေရူဆလင်ကို ဝင်စီးချိန်မှာ ဘုရားကျောင်းမှပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခိုးခံရတာလား၊ ဖွက်လိုက်ကြတာလား၊ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရလားဆိုတာ ခုထိမသိကြရသေးပါဘူး။ ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေအရ သေတ္တာဟာ ပထမဆုံးဘုရားကျောင်းထဲက ဝင်္ကပါလှိုဏ်လမ်း တနေရာရာမှာ လှုံခြုံစွာရှိဆဲပဲလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်မှာ ထိုလှိုဏ်တွေထဲ ဝင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အကြောင်းက ခုအဲဒီနေရာဟာ မူဆလင်တွေရဲ့ နာမည်ကြီး Dome of Rock ဗလီ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ Ark ကို အီသီယိုးပီးယား မင်းညီမင်းသားတစ်ပါးက လွတ်ရာကို ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး မြို့ငယ်တစ်ခုက ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဖွက်ထားခဲ့ပါသတဲ့။ ခုထက်ထိ အဲဒီ ဘုရားကျောင်းမှာ Ark ကို ဂျူးဘုန်းတော်ကြီးတွေက စောင့်ရှောက်နေကြပါတယ်။ ပညာရှင်အဖွဲ့တွေက လေ့လာခွင့်တောင်းတော့ စောင့်တဲ့လူကလွဲရင် ဘယ်သက်ရှိကမှ Ark ကို ကြည့်ခွင့်၊ ဖွင့်ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့ခင်ဗျား။ ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို phothagyan ဘလော့မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
MDb Rating (7.6/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (85/100)% ရရှိထားပါတယ်။(ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပြောင်မြောက်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် Jonathan Ke Quan ကိုဒီနေရာကနေဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်
IMDb Rating (8.2/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (89/100)% ရရှိထားပါတယ်။(Indiana Jones and the Last Crusade ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ ပစ္စည်းကတော့ Holy Grail ပါ။ တော်တော်များများလဲ ကြားဖူးသိဖူးကြမှာပေါ့။ ဒီခွက်ကို ယေရှုနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာ သုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျမ်းစာအလိုအရ ယေရှုရဲ့သွေးကို Josephက ဒီခွက်နဲ့ပဲ ခံယူခဲ့ပါသတဲ့။ ဒါလဲပဲ ဂျေရူစလင် ကျဆုံးချိန်မှာ ပျောက်ဆုံးတဲ့စာရင်းထဲမှာပါပါတယ်။ တချို့မှတ်တမ်းတွေအရ Templar တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဘေးလွတ်ရာကို သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး လုံခြုံတဲ့ နေရာတခုမှာ ဖွက်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့ ရေရေရာရာမသိနိုင်တော့ပေမယ့် ဂျေရူဆလင်နဲ့ အနောက်ကမ္ဘာ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာလို့ပဲ ယူဆရပါတယ်။ ဒီခွက်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ် တော်တော်ခိုင်မာတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ Holy Grail ဆိုတာ ခွက်တစ်ခွက်မဟုတ်ပဲ ယေရှုရဲ့ဇနီး Mary Magdaline ကို လျှို့ဝှက်ခေါ်ဆိုတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အကျယ်သိချင်ရင်တော့ Da Vinci Code ရုပ်ရှင်ကို ပြန်ကြည့်ကြည့်ကြပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို phothagyan ဘလော့မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
IMDb Rating (6.1/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (78/100)% ရရှိထားတဲ့အင်ဒီယာနာဂျုံးရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဇာတ်ကားပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ CM Fans တွေအတွက် အထူးဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ တစ်ချိန်က Superheroes ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ Epic အဖြစ်ဆုံး အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် သတ်မှာတ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာ Zack Snyder ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ Zack ကိုယ်တိုင်က သူ့ဘဝမှာ ဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ခု အပါအဝင်ပါလို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။Imdb Rating 7.6 ရရှိထားပြီး ဆုပေါင်းများစွာလည်းရထားသေးပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အပြိုင် Altarnate Reality တစ်ခုမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ အဲ့ Reality မှာ Superheroes တွေ တကယ်ရှိပြီး သူတို့က နိုင်ငံရေး လူမှု့ရေးတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်မှု့တွေရှိနေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အနားယူနေတဲ့ စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်အသတ်ခံလိုက်ရတာကနေစတော့တာပါပဲ။အသတ်ခံရသူက ကျွမ်းကျင်တဲ့ စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရတာပါ။အဲ့မှာပဲ ကျန်တဲ့ စူပါဟီးရိုးတွေက ပြန်စုပေါင်းပြီး ဒီ လက်စားလိုက်ချေနေတဲ့သူက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။သူတို့တွေ ဒီလို ဖော်ထုတ်ရာမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုပို နက်နဲလာတဲ့ ဇာတ်ကွက်ကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမှာပဲ ဖြစ်တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင်တော်ရုံစူပါဟီးရိုး ကားတွေကို မကြိုက်တဲ့သူတွေတောင် ဒီကားတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာဖြစ်လို့CM Fans တွေကို လက်လွတ်မခံပဲကြည့်ရှု့ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။DC ရဲ့ Deep ဖြစ်တဲ့ Epic တွေထဲက တစ်ကားပေါ့ဗျာ။
The Subversion ( 2018 )
၂၀၁၈ ထွက် ကိုရီးယား Mystery, Triller ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ IMDB Rating 7.1 ထိရရှိထားတဲ့The Witch:Part 1 The Subversion ပါတဲ့။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုကလေးဆုံးရှုံးထားတဲ့ လင်မယားက ခေါ်ယူမွေးစားလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကလည်း အတိတ်မေ့နေတဲ့အတွက် အရင်ကအကြောင်းတွေမမှတ်မိပါဘူး။ ကောင်မလေး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက် ဆုကြေးငွေ အများကြီးရနိုင်တဲ့သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုပြရာမှာ အများအံ့အားသင့်စရာဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ အကြောင်းကိုလူတွေသိသွားပြီးအတိတ်က အရိပ်ဆိုးက ပြန်လိုက်လာတဲ့အခါမှာ…
လူတစ်ယောက် Van ကားတစ်စီးစီးပြီး ကားပါကင်ထဲကိုဝင်လာတယ်. တစ်ဖက်မြစ်ကမ်းကိုမြင်ရတဲ့နေရာနားမှာကားကိုရပ်တယ်.ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Rifle ကို ပြင်ဆင်ပြီး မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုချိန်တယ်.စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အသက်ကို၀၀ရှူပြီး သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်တွေကို rifle နဲ့သေချာချိန်နေတယ်.သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်တွေက အခြားမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းပေါ်မှာ ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းသွားလမ်းလာလုပ်နေတဲ့လူတွေ.စက္ကန့်ဝက်လောက်ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာ သူစပစ်တယ်.လူပေါင်းငါးယောက်သေတယ်.ပစ်မှတ်တွေကိုပစ်ပြီးတဲ့အခါ ထွက်ပြေးသွားတယ်.မကြာခင်ပဲရဲတွေမှူခင်တြဖစ်ဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်.သဲလွန်စတွေလိုက်ရှာတဲ့အခါ ကားပါကင်ဝင်ကြေးအတွက် လူသတ်သမားရှင်းခဲ့တဲ့အကြွေစေ့ကနေ လူသတ်သမားရဲ့လက်ဗွေရာကိုရရှိခဲ့တယ်.လက်ဗွေရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ လူသတ်သမားဟာ အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ sniper အဖြစ်စစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ James Barrဖြစ်နေကြောင်းသိရတယ်. ရဲတေကွ James Barr ရဲ့အိမ်ကို ဝင်စီးတဲ့အခါ Barr ကိုအိပ်ယာပေါ်မှာအိပ်နေရင်းတွေ့တယ်. Barr ကိုဖမ်းပြီး သီးသန့်ခန်းထဲမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါ ဘာတစ်ခွန်းမှပြန်မပြောဘဲ Jack Reacher လို့သာရေးပေးတယ်.အဲ့တော့ ရဲတွေက Jack Reacher အကြောင်းကိုစုံစမ်းရတာပေါ့ .Jack Reacher ဆိုတဲ့လူဟာ credit card မရှိ e-mail မရှိ.အိမ်လိပ်စာအတိအကျမရှိတဲ့လူ သူက သရဲလိုပဲ. နှစ်နှစ်လောက်ပျောက်နေတဲ့လူ. အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ စ်မှုထမ်းခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာသာသိရတယ်.သူ့ကိုဘယ်လို ရှာရမလဲပြောနေကြချိန်မှာပဲ Jack ဟာ သူတို့ဆီရောက်လာတယ်.Jack က barr နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းတော့ရဲတွေကခွင့်ပြုတယ်.Barr ဟာ Jack နဲ့တွေ့ချိန်မှာ ရဲကားပေါ်ကလူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် coma ဖြစ်ပြီးမေ့မြောနေတယ်. နောက်တော့ barr ရဲ့ ရှေ့နေ Helen rodinနဲ့တွေ့ပြီး အမှုကိုအတူတူစုံစမ်းကြတဲ့အခါ Barr ကတကယ်ပဲအပြစ်ရှိလား တကယ်ပဲသူကအပြစ်မဲ့တဲ့လူငါးယောက်ကိုသတ်ခဲ့တာလား ဘာလို့သတ်တာလဲဆိုတာတွေကိုတော့ ……….. Jack Reacher ဇာတ်ကားဟာ မြောက်အမေရိကမှာ $80.1million အခြားနိုင်ငံတွေမှာ$ 138.3million နဲ့အတူ Total worldwide $218.3million ဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်. ဒီဇာတ်ကားအတွက်သူတို့သုံးခဲ့တဲ့ငွေကတော့ $60ပဲဖြစ်ပါတယ်.ရင်ငွေထက်သုံးဆကျော်ပြန်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာJack reacher ဇာတ်ကားဟာ 2005 တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ Lee Child ရဲ့ one shot ဆိုတဲ့ novel ကိုပြန်ရိုက်ထားတာပါ Jack reacher ရဲ့ sequel ဖြစ်တဲ့ Jack Reacher : Never Go Back ကိုတော့ october 21 ရက်နေ့ကစပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ရုံတင်နေပါပြီJack Reacher ဇာတ်ကားဟာ IMDB မှာဆိုရင်ဖြင့် 7/10 အထိရထားပြီး rotten tomatoes မှာတော့ 62% ရရှိထားလို့ rating ကောင်းတယ်ဆိုရပါမယ် သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ Jack reacher အဖြစ် mission imposisble,edge of tomorrow,war of the worlds တို့လိုဇာတ်ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ Tom Cruise က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Helen Rodin အဖြစ် Rosamund Pike နဲ့ James barr အဖြစ် Joseph Sikora တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်.Director ကတော့ Christopher McQuarrie ပါ Jack Reacher ဟာ action thriller အမျိုးအစားကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တေ့ာ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်မှာပါ။
MDb (8.2/10)…Rotten Tomatoes (79%)ဒီဇာတ်ကားကတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ခံယူချက်တွေ အသိအမြင်တွေကို ဗြောင်းဆန်စေမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ အသိဉာဏ်တွေကို ဇဝေဇဝါအဖြစ်စေဆုံးကတော့ အမှန်နှစ်ခု ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ……… မင်းသားကြီး A Jay Drvgn က လေးတန်းပဲအောင်တဲ့ မဟုတ်မခံ ရိုးသားကြိုးစားသူ….. သူက အသိပညာကို သူ့အလုပ် Cable ရုပ်ရှင်လိုင်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီး ရှာဖွေတတ်သူ။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့သမီးလေးရဲ့ မဖွယ်မရာ ဗွီဒီယိုကို လူတစ်ယောက်က ရိုက်ကူးပြီး သူ့သမီးနဲ့ သူ့မိန်းမကို အကြပ်ကိုင်ပါတော့တယ်။ဒီမှာပဲ လူသတ်မှုတစ်ခု မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီလူသတ်မှုမှာ သူ့မိသားစုကို ကာကွယ်ဖို့ မင်းသားကြီး A Jay က သူသိထားတဲ့ အသိပညာကုန်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒီအမှုမှာ သူရင်ဆိုင်ရမယ့် လူက ပေါ့သေးသေးပါပဲ။ ဘယ်သူလဲဆိုတော့ ထောက်လှမ်းရေးက ရဲချုပ်ပါ။ရဲချုပ်က ပါစင်နယ်အရရော တာဝန်အရရော ပင်ကိုသဘောအရရော ဒီအမှုကို ရေကုန်ရေခန်းလိုက်မှာပါ။ ရဲချုပ်အဖြစ် မင်းသမီး တဘူးက ခပ်ထည်ထည်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး သူက ၄ တန်းအောင်လူနဲ့ ပြိုင်မှာပါ။ ၄ တန်းပဲအောင်ထားတဲ့ လူကလဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့တော့ မဟုတ်ချေ။ သူက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို နေ့ညမပြတ် တောက်လျှောက်ကြည့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကနေ အသိပညာ အမြင်ဗဟုသုတတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် သောက်သုံးနေတဲ့လူ။ ဒီလိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့ အမှန်နှစ်ခုက မိသားစုအရပါ ထိပ်တိုက်တွေ့လာတဲ့အခါ…………..။ အင်မတန့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားအစကတည်းက ဇာတ်ရှိန်တက်လာတာ ဇာတ်လမ်းသာ ပြီးသွားတယ်။ ဇာတ်ရှိန်က မကျသေးဘဲ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခိုးလို့ခုလု တစ်လစ်ကြီး ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာကလဲ ဇာတ်ရှိန်ကိုတောက်လျှောက်တင်ချင်လို့ ထင်ပါတယ်။ Bollywood ရဲ့ အကတွေတောင် မထည့်ထားပါဘူး။ ဒီနှစ်ထဲ ထွက်ရှိပြီးသမျှ Bollywood ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားပါပဲ။ Rating တွေအနေနဲ့လဲ IMDb (8.2/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (79%) ထိရရှိထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ များပြားသွားပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးခွန်းထုတ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး….ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်မေးခွန်းထုတ်ချင်တာပါ။ ကြည့်ကိုကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားကို မိတ်ဆွေတို့ကိုကြည့်စေချင်တဲ့အကြောင်းရင်းလဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံလိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုမှာ တရားရုံးက သက်သေမခိုင်လုံဘဲ သံသယတရားခံကို သေဒဏ်အထိပြစ်ဒဏ်ချထားတာကို ဘဝင်မကျနိုင်လို့ပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲက ထုတ်နုတ်မှုတစ်ခုကို တင်ပြရရင်…… “အပြစ်ရှိတဲ့လူလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် သက်သေမရမချင်း …..အပြစ်ရှိရင်တောင် အပြစ်ပေးလို့မရဘူးလို့ ဥပဒေက အခိုင်အမာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားတာပါပဲ။
IMdb 7.2 ရထားပြီး ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့သဲထိပ်ရင်ဖို ကားတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးခြင်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးးကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒရာမာ အချိုးလေးတွေနဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်း အလှည့်အပြောင်းလေးတွေက တော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို တကားလုံး မထတန်းကြည့်အောင် ဆွဲဆောင်သွားမှာပါဇာတ်လမ်းး အကျဉ်းလေးကတော့ အလက်စကာ မြို့ကို အပို့ခံလိုက်ရတဲ့ စုံထောက်ကြီးဟာ တစ်နေ့မှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အသတ်ခံရတဲ့ အမှုကိုလိုက်ရင်း မတော်တဆ သူ့ တွဲဖက်ကိုသေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်မိပါတယ် ဒါပေမဲ့စုံထောက်ဟာ သူ့အပြစ်ကို ဝန်ခံရမယ် အနေအထားကနေမထင်မှတ်ထားတဲ့ အလီဘိုင် တစ်ခုကိုပြနိုင်ခဲ့ပြီး အပြစ်ကနေလွတ်သွားပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူ့ဟာ သူ့ကိုသူတော့ လိပ်ပြာမသန့်ခဲ့ပါဘူး ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ သူ့ အကြောင်းတွေကို သိထားတဲ့ တစ်ယောက်က သူ့ကိုခြိမ်းခြောက်အကြပ်ကိုင်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကဲ စုံထောက်ကြီး ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ နောက်ကွယ်က သူကကောဘယ်သူလဲ ဘယ်လို အရှုပ်ထုတ်တွေကြောင့် သမိုင်းရှုပ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက မထတမ်းကြည့်ကြရမှာပါ
မင်းသားကြီး နီကိုလပ်ကေ့ချ် ပါဝင်ထားတဲ့ IMDb Rating (6.9/10) ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Comedy အမျိုးအစား နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဆင်ထားတာ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ မကြည့်ဖူးသေးလို့ဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ပြီးမေ့သွားလို့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ကြည့်သင့်တဲ့ Adventure ဇာတ်ကားကောင်းပါ။
မင်းသားကြီး နီကိုလပ်ကေ့ချ် ပါဝင်ထားတဲ့ IMDb Rating (6.5/10) ရရှိထားတဲ့ Action, Adventure, Comedy အမျိုးအစား နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။National Treasure (2004) ရဲ့အဆက်အဖြစ်ပုံဖေါ်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဆင်ထားတာလဲ ထုံးစံအတိုင်း အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ မကြည့်ဖူးသေးလို့ဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ပြီးမေ့သွားလို့ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ကြည့်သင့်တဲ့ Adventure ဇာတ်ကားကောင်းပါ။
Badla (2019)__________IMDB – 7.9/10 =========================Badla -2019 ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားဟာဘောလိဝုဒ်ပရိသတ်တွေကြား တော်တော်လေး လူသိများတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူးဗျာ။“မအိုသေး” ဆိုတဲ့ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးရဲ့ ပြောစကားလိုအသက်ကြီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ထိ မြင်တွေ့နေရတုန်း အမီတာဘချန်းနဲ့Mulk-2018 ရဲ့ မင်းသမီး Tapsee Pannu တို့ နှစ်ယောက်ကို အဓိက မြင်တွေ့ရမှာပါ။——————————————————–“ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း”တစ်နှစ်တာ Focus Business Person ဆုကိုရရှိထားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နိုင်နာဟာ လတ်တလောမှာ လူသတ်မှုတစ်ခုအတွက်သံသယရှိရသူအဖြစ် အကျယ်ချုပ်နဲ့ စောင့်ကြည့်ခံထားရပါတယ်။ဖြစ်ရပ်ကဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ သူရယ်၊ ပူနွေးနွေးသတ်ခံထားရတဲ့ အလောင်းတစ်ခုရယ်နဲ့အခန်းဟာ ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို နိုင်နာက သူမသတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုနေတယ်။ဒီအတွက် သူ့ရှေ့နေ ဂျင်မီဟာ အရမ်းတော်တဲ့ ရှေ့နေ ဂု(ပ်)တာကို ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။ရှေ့နေ ဂု(ပ်)တာဟာ သိပ်ကို တော်တဲ့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ပါ။အမှုမှန်ကို ဖော်ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူပေါ့။နိုင်နာရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ”သေဆုံးသူနဲ့ အာဂျွန်းနဲ့ သူနဲ့ကို ဟိုတယ်ကို ချိန်းဆိုပြီစောင့်ခိုင်းပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့…ငွေကို လာရောက်မယူဘဲ စာတိုတစ်စောင်ကို ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ထောင်ချောက်တစ်ခုပဲ ဆိုတာ အာဂျွန်းသိနေတော့ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာမှာနိုင်နာဟာ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ဦးခေါင်းကို ကိုင်ဆောင့်ခံရပြီးသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပြီး သတိလည်လာတော့ အာဂျွန်းဟာ ငွေတွေကြားမှာသေဆုံးနေခဲ့ပါပြီ” တဲ့။နိုင်နာရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ကို ရှေ့နေကြီး ဂု(ပ်)တာကြံဆစဉ်းစားရင်း သဲလွန်စများ လိုက်လံ ဖော်ထုတ်ရာမှာတော့…..။အမှုသည် နိုင်နာနဲ့ ရှေ့နေကြီး ဂု(ပ်)တာတို့ အတူအမှုမှန်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရင်းပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်။အချိန်ကာလ သေးသေးလေးမှာတောင်ဇာတ်လမ်းက မျိုးစုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တာမို့ဘယ်အခန်းကိုမှ လက်လွတ်မခံဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။——————————–”Spoiler Alert“စပိန်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့The Invisible Guest (2016) ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။မူရင်းဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းသွားနိုင်ပေမဲ့မူရင်းကို မကြည့်ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့အားရစေမိမှာ အမှန်ပါ။တောင်းဆိုချင်တာကတော့မူရင်းဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးသူတွေအနေနဲ့ မန့်ဘောက်စ်ထဲ spoiler ရေးမသွားဖို့တော့အနူးအညွတ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ။
အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားကတော့ 2018 မှာ ထွက်လာတဲ့ အသစ်စက်စက်ရုံတင်ကား Bad Times At The El Royale ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါEl Royale ဆိုတဲ့ ဟိုတယ်ရှေ့မှာ ဖာသာဒန်နီယယ်ဖလင်းဆိုတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ အဆိုတော်ပေါက်စခါလင်းဆွိတို့ တွေ့ဆုံတဲ့နေရာကနေ ဇာတ်လမ်းလေးကို စတင်ထားပါတယ်ဒါလင်းကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားကနေ သီချင်းဆိုဖို့ လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးသိပ်မပြည့်စုံလို့ ဒီဟိုတယ်မှာလာတည်းတာပါ ဖာသာဖလင်းကတော့ သူ့ညီဖြစ်သူ ဖွက်ထားခဲ့တဲ့ ငွေတွေကို ပြန်ယူဖို့ ဟိုတယ်ကို ရောက်လာခဲ့တာပါသူတို့အရင် ဟိုတယ်မှာ ရောက်နေနှင့်တဲ့သူကတော့ ဖုန်စုပ်စက်အရောင်းဝန်ထမ်းဟန်ဆောင်ထားတဲ့ အေးဂျင့်ဘရော့ဘက်ပါ သူ့မှာလည်း လူတွေသိပ်မတည်းကြတော့တဲ့ El Royale ကို လာတည်းရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးမှာ ဝန်ထမ်းဆိုလို့ မိုင်စ်မီလာဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ်သူကလဲ ဆေးကြောင်နေတာလိုလို တစ်ခုခုကိုပဲ လန့်နေတာလိုလိုနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ပါ နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာတာကတော့ အမ်မလီဆိုတဲ့ ဟစ်ပီလေးပါသူကတော့ ဟိုတယ်မှာ ဘယ်လိုအခန်းပဲတည်းရတည်းရဆိုပီး အခန်းတစ်ခန်းကို ငှားလိုက်ပါတယ်သူကရော ဘာတွေ လျှို့ဝှက်ထားတာလဲ အကြောင်းကိုယ်စီ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ ရောက်လာကြတဲ့ သူစိမ်းတွေအားလုံး ဒီဟိုတယ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတွေ့ရမှာလဲဆိုတာတော့ သည်းထိပ်ရင်ဖိုနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားလေးပါIMDB rating က 7.1 ထိရထားနဲ့ ထိုက်တန်သလို ကြည့်ရအတော်ကောင်းတဲ့ ဒရမ်မာကားလေးပါဒါ့အပြင် ဒီထဲမှာ အော်စကာဆုရမင်းသားကြီး Jeff Bridges, Thor မင်းသား Chris Hemsworth နဲ့ Fifty Shades Of Grey မင်းသမီး Dakota Johnson တိုနဲ့အတူ တခြားနာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်လက်မလွတ်တမ်း ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးလို့ ညွှန်းပေးပါရစေ
Killers Anonymous(2019)================ဒီဇာတ်ကားက ပြီးခဲ့တဲ့လကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ အမေရိကန် အက်ရှင် ကား တကားပါLion Gates ကုမ္ပဏီက ဖြန့်ချိတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ Martin Owen က ရိုက်ကူးထားတာပါ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေကတော့ Jessica Alba Tommy Flanagan Gary Oldman Rhyon Nicole Brown My Anna Buring Michael Socha Tim Mclnnery Sam Hazeldine တို့ ဖြစ်ပါတယ်Killer Anonymous ဆိုတာ လူသတ်သမားတွေကို စုဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့တခုဖြစ်ပြီး လူတယောက်ကို ကိုယ် ဘယ်လိုသတ်ခဲ့တယ် သတ်နေတုန်း ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားရတယ် စတဲ့ လူသတ်ခြင်းအပေါ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖလော်ဆော်ဖီကို အချင်းချင်းဝေမျှရင်း စိတ်ဖိအားလျှော့ချကြတဲ့ ပုံစံနဲ့ လည်ပတ်နေတာပါ အဲဒီအဖွဲ့ကို ဘယ်သူက အဓိက ကြိုးကိုင်နေလဲ စီအိုင်အေရဲ့ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုတွေနဲ့ master mind တွေ က အစီအစဉ်တခုကို ချတဲ့ အခါ ပါဝင်သူတွေကိုယ်တိုင် မသိလိုက်အောင် လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို အသုံးချပြီး ဘယ်လို ဉာဏ်ကစားကြလဲ ကြည့်ပျော်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတခုပါ ခင်ဗျာ
Bring Me Home (2019) မင်းသမီးကြီး လီယောင်အေး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ thriller ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ပရိတ်သတ်အများ သိတဲ့ ချန်ဂင်မင်းသမီးမလို့ သရုပ်ဆောင်ကတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ ဗီလိန်နေရာကတော့ Itaewon Class ထဲက ဥက္ကဌကြီးမလို့ ကြည့်ကောင်းမှာအသေအချာပါပဲ။ ဂျန်ယောင်း(လီယောင်အေး) ဟာ ပျောက်ဆုံးသွားတာ ခြောက်နှစ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ သားလေးကို မမောမပန်းလိုက်ရှာနေခဲ့သူပါ။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟာ အလုပ်တောင်ထွက်ပြီး နိုင်ငံအနှံလိုက်ရှာနေခဲ့တာပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ နောက်ပြောင်တဲ့ သူတွေရဲ့ သတင်းအမှားပေးမှုကို ယုံစားပြီး သားဖြစ်သူနောက် လိုက်ရာမှ ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ဂျန်ယောင်းကို သားဖြစ်သူနဲ့တူတဲ့ ကလေးငယ်ကို တွေ့ထားတယ်လို့ သတင်းပေးသူ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အသေးစိတ်ကို သိရှိနေသူမလို့ ဂျန်ယောင်းတစ်ယောက် ယုံကြည်ပြီး လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။ ရှာဖွေဖို့ ထွက်လာတဲ့နေရာကတော့ မန်ဆန်ဆိုတဲ့ တံငါရွာလေးပါ။ ငါးဖမ်းတဲ့လူတွေ လာရောက် အပန်းဖြေတဲ့နေရာပေါ့။ သတင်းပေးပြောသလို သူမသားကို ထိုရွာလေးမှာ ရှာတွေ့ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ခွန်အားနဲ့ မေတ္တာတွေကို အပြည့်အဝဖော်ကျူးထားတဲ့ ကားကောင်းကလေးမို့ မလွှတ်တမ်း ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။